Kukuvadza kunoti: chii chaunoda kuziva? | Law & More BV
Blog » Kukuvadza kunoti: chii chaunoda kuziva?
Kukuvadza kunoti: chii chaunoda kuziva?
Nheyo huru inoshanda mumutemo weDutch muripo. mumwe nomumwe anotakura zvakaipa zvake. Pane dzimwe nguva, hapana munhu ane mhosva. Funga, semuenzaniso, nezvekukuvara nekuda kwechimvuramabwe. Kukuvara kwako kwakakonzerwa nemunhu here? Pakadaro, zvinogona kungobhadhara kukuvara kana paine chikonzero chekuti munhu abate chikwereti. Nheyo mbiri dzinogona kusiyaniswa mumutemo weDutch: contractual nemutemo mutoro.
Iwo mapato anopinda muchibvumirano here? Ipapo hachisi icho chinangwa chete, asiwo chisungo kuti zvibvumirano zvakaitwa mukati mazvo zvinofanirwa kuzadzikiswa nemapato ese. Kana bato ikasazadzisa zvainosungirwa kuita muchibvumirano, pane kupfupisa. Funga, semuenzaniso, mamiriro ezvinhu apo mutengesi asina kuendesa zvinhu, kuvanunura munguva yekupedzisira kana isina kunaka.
Nekudaro, iko kupfupika chete hakusati kuchikupa iwe muripo. Izvi zvinodawo kuzvidavirira. Kuzvidavirira kunodzorwa muChinyorwa 6:75 cheDutch Civil Code. Izvi zvinoratidza kuti kupfupika hakufanirwe kutaurwa kune mumwe mubato kana zvisiri nekuda kwemhosva yake, uye haisi nhoroondo yemutemo, chiitiko chepamutemo kana maonero akatariswa. Izvi zvinoshandawo mune zvechisimba majeure.
Iko kune kutadza here uye zvakare kuri imputable? Muchiitiko ichocho, kukuvara kunoguma hakugone kudomwa zvakananga kubva kune rimwe bato. Kazhinji, ziviso yekukanganisa inofanirwa kutanga yatumirwa kuitira kuti ipe mumwe mukana mukana wekuzadzisa zvisungo zvake uye mukati menguva inonzwisisika yenguva. Kana rimwe bato richiri kukundikana kuzadzisa zvarinosungirwa, izvi zvinoguma nekukanganisa uye muripo unogona kubvunzwa.
Uye zvakare, mhaka yemumwe mubato haigone kurerutswa, tichifunga nezve hwaro hwerusununguko rwechibvumirano Mushure mezvose, mapato muNetherlands ane rusununguko rukuru rwechibvumirano. Izvi zvinoreva kuti mapato anobvumirana akasununguka kusabvisa rimwe rinokurumidza kuzvidavirira. Izvi zvinowanzoitwa muchibvumirano pachacho kana mune zvakajairika mazwi uye mamiriro ezvinhu anonzi anoshanda mazviri kuburikidza ne kufananidzira mutemo. Chisungo chakadaro chinofanirwa, zvisinei, kusangana nemimwe mamiriro ezvinhu bato risati rauya kuti rive nemhosva. Kana chirevo chakadaro chiripo muhukama hwehukama uye chosangana nemamiriro ezvinhu, nzvimbo yekutanga inoshanda.
Imwe yeanonyanyo kuzivikanwa uye akajairika mafomatiro ezvinhu zvechivanhu dhinari ndiro dhayeti. Izvi zvinosanganisira chiitiko kana kusiiwa nemunhu izvo zvisiri pamutemo zvinokuvadza mumwe. Funga, semuenzaniso, mamiriro ekuti muenzi wako anogona kungoerekana agogodza pavaseti yako yakakosha kana kudonhedza kamera yako yemifananidzo inodhura. Muchiitiko ichocho, Chikamu 6: 162 cheDutch Civil Code chinotaura kuti uyo akabatwa nezviitiko zvakadaro kana kusiiwa ane mvumo yekubhadhara kana mamwe mamiriro akaita.
Semuenzaniso, maitiro kana chiitiko chemumwe munhu chinofanira kutanga kutanga kutorwa senge zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mhaka kana chiitiko ichi chichibatanidza kukanganiswa kwerimwe kodzero kana chiito kana kusiyiwa mukupesana nebasa repamutemo kana kushushikana munharaunda, kana maitiro asina kunyorwa. Uyezve, chiitiko chinofanira kunge chiri zvinoratidzwa ne 'muparadzi'. Izvi zvinogoneka kana ari nekuda kwemhosho yake kana chikonzero chinomubatirira nemutemo kana mumugwagwa. Chinangwa hachidiwe mumamiriro ezvinhu ekuzvidavirira. Chikwereti chidiki kwazvo chinogona kukwana.
Nekudaro, iko kukanganiswa kwekutyora muyero hakuwanzo kutungamira kune mutoro kune chero munhu anotambura kukuvara semhedzisiro. Mushure mezvose, kuve nemhosva kunogona kuramba kuchikiswa na zvinodiwa zvehukama. Ichi chinodikanwa chinotaura kuti hapana chisungo chekubhadhara muripo kana mutemo wakatyorwa ukasashandira kudzivirira kubva mukukuvadzwa kwakatadza neiye akabatwa. Naizvozvo zvakakosha kuti 'munyaradzi' abate zvisiri izvo 'kune' munhu akakuvadzwa nekuda kwekutyorwa kweiyo standard.
Mhando dzekukuvara dzinokodzera kubhadhara
Kana zvinodiwa zvechibvumirano kana zvechivanhu zvasangana, mubhadharo unogona kupihwa. Iko kukuvara kwakakodzera kubhadharwa muNetherlands kunobva kwaisanganisira kurasikirwa kwemari uye kumwe kurasikirwa. Iko kurasikirwa kwemari zvinoenderana neChitsauko 6:96 cheDutch Civil Code zvine chekuita nekurasikirwa kana kurasikirwa kwepundutso kwakatambura, kumwe kurasika kunetsekana maererano nechinyorwa 6: 101 cheDutch Civil Code kutambura kusingaonekwe. Mukutaura, kukuvara kwepfuma kunogara kuripo uye kwakakwana kunokodzera kuripwa, zvimwe zvinokanganisa chete maererano nemutemo zvaunopa mumashoko mazhinji.
Kutsiva kuzere kwekukuvara kwakatambura chaizvo
Kana zvasvika pakuripirwa, iyo nheyo huru ye kudzorera kwakazara kwekukuvara chaiko kwakatambura zvinoshanda.
Iyi nheyo inoreva kuti uyo akakuvara mubato wechiitiko chinokuvadza haazodzoserwe kune zvinopfuura kukuvara kwake kwakazara. Chinyorwa 6: zana yeDutch Civil Code inotaura kuti kana chiitiko chimwe chete ichi chisiri kungokonzeresa akakuvadzwa, asiwo zvinopa zvimwe zvinobatsira, bhenefiti iyi inofanirwa kubhadhariswa kana uchifunga kukuvara kunofanirwa kuripwa, chero izvi zvichinzwisisika. Bhenefiti inogona kutsanangurwa sekuvandudza mune (aseti) chinzvimbo chemunhu akabatwa nekuda kwechiitiko chinokanganisa.
Zvakare, kukanganisa kwacho hakuzogare kwakabhadharwa zvizere. Hunhu hunokanganisika hwemunhu akabatwa iye kana mamiriro ezvinhu munzvimbo ine njodzi yemunhu akabatwa anoita basa rakakosha mune izvi. Mubvunzo unofanirwa kubvunzwa ndowe unotevera: anga akuvadzwa angadai akaita zvakasiyana nezvaakaita here maererano nekuitika kana kukura kwekukuvara? Mune zvimwe zviitiko, anenge akuvadzwa anogona kumanikidzwa kudzikisira kukanganisa. Izvi zvinosanganisira mamiriro ekuva nechokudzimisa moto pamberi pechiitiko chinokanganisa, senge moto. Pane here mhaka kune uyo akabatwa? Kana zvakadaro, maitiro anokanganisa muchimiro chinotungamira kudzikiswa kwemubvumirano yemubhadharo weiye munhu ari kukonzera kukuvara uye kukuvara kunofanira kukamurwa pakati pemunhu ari kukonzera kukuvadzwa uye munhu anenge akuvadzwa. Mune mamwe mazwi: a (yakakura) chikamu chekukuvara inosara pamubhadharo weiye akabatwa. Kunze kwekunge iye akakuvadzwa akadhinirwa iyo.
Inishuwarenzi inopesana nekukuvara
Tichifunga nezvezviri pamusoro, kungave kuchenjera kutora inishuwarenzi kuti usasiyiwa pamwe nekukuvara semunhu akabatwa kana kukonzera kukuvara. Mushure mezvose, kukuvadza uye kuzviti icho chiri dzidziso yakaoma. Uye zvakare, mazuva ano unogona kutora zvirongwa zveinishuwarenzi dzakasiyana-siyana nemakambani einishuwarenzi, akadai seinishuwarenzi yemba, imba kana inishuwarenzi yemotokari.
Uri kubata nekukuvara uye unoda kuti inishuwarenzi iripe mari yekukuvara kwako? Ipapo iwe unofanirwa kutaurira kukuvara kune yako inshuwarheni iwe pachako, kazhinji mukati memwedzi. Zvinokurudzirwa kuunganidza hwakawanda humbowo hweizvi. Ihupi humbowo hwaunoda hwaenderana nerudzi rwekukuvara uye zvibvumirano zvawakaita neinishuwarenzi wako. Mushure memushumo wako, inishuwarenzi inoratidza kana uye uye kukuvara kupi kuchidzorerwa.
Ndapota cherekedza kuti kana kukuvadzwa kwacho kuchidzorerwa neinishuwarenzi yako, haugone kuendesa kukuvadzwa uku kubva kumunhu ari kukuvadza. Izvi zvakasiyana nezve kukuvara kusingafukidzwe neinishuwarenzi yako. Iyo yeprimramu inowedzera semhedzisiro yekukumbira kukuvadzwa kubva kune inshuwarisi yako zvakare kwakakodzera kuripwa nemunhu akonzera kukuvara.
At Law & More isu tinonzwisisa kuti chero kukuvara kunogona kuva nekusvika kure migumisiro kwauri. Uri kubata nekukuvara uye iwe unoda kuziva kana iwe kana iwe ungataure izvi kukuvara kana? Iwe uri kubata nerevo yekukuvara uye iwe ungada rubatsiro rwepamutemo mumaitiro here? Uri kuda kuziva nezve chii chimwe chatingaitira iwe? Ndokumbirawo mubate Law & More. Magweta edu inyanzvi mumunda wezvikanganiso zvekukuvara uye vanofara kukubatsira kuburikidza neyavo uye yakatarisana nzira uye zano!
Previous Post Mamiriro ezvinhu mumamiriro ekubatanidza mhuri
Next Post Kudzinga